Maxaa Al-Bashir ku sugaya bannaanka madaxtooyada? - BBC News Somali
Image caption Mudaharaadyada Suudaan ayaa wali sii socda
Cumar Al-Bashiir ayaa xukunka dalka Suudaan heystay ku dhawaad 30 sano, isagoo xilkaas qabtay ka dib markii afgambi aan dhiig lagu daadinin xilka looga tuuray hoggaamiyihii hore ee dalkaas.
Al-Bashiir waxaa lagu hayaa waqtigan goob amaankeeda la sugay, ciidamadda milatariga ee gacanta ku haya Suudaan ayaa sheegay in aysan suurta gal ahayn in muwaadin reer Suudaan ah lagu maxkamadeeyo wadanka dibaddiisa inta ay hayaan awooda dalka.
Waxay raaciyeen in marka talada dalka dawlad rayid ah lagu soo celiyo ay xor u yihiin in arinka maxkamadaynta ay wax kabadali karaan.
Dalabkii u horeeyay ee ay maxkamadda danbiyada dagaalka ee aduunku ku doonaysay xariga Al-Bashiir wuxuu soo baxay 4-tii bishii Maarso ee sannadkii 2009-kii, halka kii labaad uu soo baxay 12-kii bishii Luulyo ee sannadkii 2010-kii.
Dalabkan waxaa hore u diiday madaxweyne Al-Bashiir oo taageero waqtigaas ka helayay shacabka reer Suudaan oo lagu tilmaamo inay yihiin dad ku faana wadaniyadda.
Dibadbaxyo ka bilowday caro laga qaaday sicir bararka maciishada ayaa hor seeday in ay dhintaan mudaharaadeyaal badan, halka dad badan oo kalena xabsiga loo taxaabay.
Arrinkan ayaa sii fududaynaya in lagu helo fursada Al-Bashiir gacanta loogu galiyo maxkamadda danbiyada aduunka, si loogu qaado danbiyada loo haysto.
Albaabo hore ayaa ku furmaya hogaamiyahan marka uu ka soo baxo xayndaabka lagu ilaalinayo.
Dembiyada maxkamadda ICC-da ay u heysato madaxweyne Al Bashir ayaa kala ah dil, shirqool, barakicin, kufsi iyo jirdil, waxaana sidoo kale jira dembiyo dagaal oo ay kamid tahay weerarkii lagu eedeeyay inuu ku qaaday shacabka deggan gobolka daarfur.
Xasuuq la sheegay in loo geystay xubno ka tirsanaa qoomiyadaha Fur, Masalit iyo Zaghawa ayaa ka mid ah dhacdooyinka lagu eedeeyay inuu mas'uulka ka ahaa.